Vinam-pampandrosoana hoan'ny 2022 :: Hanamafy kokoa ny hafainganam-pandehany i Andry Rajoelina • AoRaha
Vinam-pampandrosoana hoan’ny 2022 Hanamafy kokoa ny hafainganam-pandehany i Andry Rajoelina
Taona fanatanterahana vina ny taona 2022, hilofo sy hiasa mafy ary haingana isika ary tsy maintsy tafita i Madagasikara», hoy ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, teo amin’ny fiafaran’ny kabary firariantsoa ho an’ny taom-baovao 2022, ny alin’ny zoma 31 desambra 2021 teo. Hanamafy kokoa ny hafainganam-pandehany hamita an’ireo Veliranony, araka izany, ny Filoha ho an’ity taom-baovao ity ary nanamafy ny fahavononany handeha lavitra eo amin’ny fampandrosoana ny firenena. Nanentana an’ireo olom-pirenena rehetra hiray hina sy hiaraka hiasa hahatongavana amin’izany ny tenany tamin’io lahateny io. «Rehefa zaraina ny enta-mavesatra dia mora zaka. Hatomboka any amin’ny fokontany sy ireo ambaratongam-pahefana rehetra izany fiaraha-mientana izany. Miantso an’ireo tompon’andraikitra rehetra ny tenako, hatramin’ireo olom-boafidy hiasa amin-kitsim-po hanompo ny tanindrazana, ka hiasa mafy hanompo ny firenena », araka ny fiangavian’ny Filoha.
Niaiky mantsy izy, fa tsy mora ny fanarenana ny firenena taorian’ireo fotoan-tsarotra rehetra nolalovan’i Madagasikara. Nanampy trotraka izany rahateo ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Mila fifandimbiasam-pahefana inefatra mifanesy isika vao hitombo toy ny an’ny firenena mandroso aty Afrika ny harinkarena faobe. Mila fanovana toe-tsaina goavana anefa izany, araka ny hevitry ny Filohan’ny Repoblika. Notsindriany fa « tsy mendrika hiaina ao anatin’ny fanakorontanana sy ny fifampizarazarana intsony ny Malagasy ». « Ny fanoherana eto amintsika mantsy dia fanoherana ny tetikasam-pampandrosoana an’i Madagasikara. Tsy tokony ho lany andro amin’ny fifanomezan-tsiny intsony isika fa handroso amin’ny fanatanterahana an’ireo vina rehetra ho tombontsoan’ny Malagasy rehetra », hoy hatrany ny hafatra napetraky ny Filoha.
Noantitranteriny fa nisy ny asa tsy maintsy natao sy atao ao anatin’ny fohy ezaka ary ny lavitr’ezaka ho fampandrosoana an’i Madagasikara. Hovitaina haingana avokoa ireny asa ireny, araka ny toky nomen’ny Filoha. Fampanantenana vaovao napetrany ohatra, ny famitana sy fanavaozana ny «lalana masoandro» mampitohy an’ireo distrika ao amin’ny ilany atsinanana miainga ao any Mananjary ary hipaka hatrany Maroantsetra. “Tanterahina avy hatrany amin’ity taona ity izany”, hoy izy. Eo ihany koa ny fanamboarana ny lalambe migodana hampitohy an’Antananarivo sy Toamasina, ny tetezam-be migodana miainga etsy Andohatapenaka ka hatrany Imerintsiatosika. Tsy ho latsa-danja koa ny fanatontosana ilay fitaterana mihantona an-tariby na ny teleferika sy ny zotran-dalamby an-tanàn-dehibe atao eto Iarivo. Ataony ho laharam-pahamehana koa anefa ny firosoana amin’ny fanodinana an’ireo vokatra vita malagasy hanatrarana ny fahavitan-tena ara-tsakafo. Nohamafisiny ny fananganana indostria manerana an’ireo distrika ao anatin’ny tetikasa « One district, one factory » izay hotohizana amin’ity taona ity ary hamaha olana maro, toy ny fiakaran’ny vidin’ny entana ilaina andavanandro. Mira zotra amin’izany ny fanorenana an’ireo fotrodrafitrasa maro, toy ny fitarihan-drano lehibe hamatsy rano fisotro madio sy hamokarana any amin’ny faritra atsimo.
Fonenana tra-doza :: Telo mianaka maty nirodanan’ny trano
Fanatsarana ny sosialim-bahoaka :: “Manan-jo hisitraka fampandrosoana sahaza ny mponina”, hoy Razafindravahy Edgard